1Password dia havaozina amin'ny kinova 6.8.5 ho an'ny Mac | Avy amin'ny mac aho
Ny kinova farany misy an'ny 1Password navoaka ora vitsy lasa izay dia v6.8.5 ary ao anatin'izany ny andiana fanatsarana lehibe ampiana ho an'ireo mpampiasa ny rindranasa miadidy ny hitandrina ny teny miafina rehetra sy ny angona manan-danja izay tsy azontsika adino.
Amin'ity indray mitoraka ity dia manampy fanatsarana ny fanitarana Chrome ny vaovao ary manatsara ny fahombiazan'ny rafitra. Toy ny mahazatra hatrany amin'ity karazana fanavaozana ity dia zava-dehibe ny hametrahan'ny mpampiasa azy faran'izay haingana satria tena ilaina ny mahazo ilay fanatsarana ny fiarovana ny fampiharana faran'izay haingana.
Ny fanatsarana sy ny zava-baovao ampiharina amin'ity kinova 6.8.5 dia mifantoka mivantana amin'ny fiarovana ankapobeny ny fitaovana ary amin'ity tranga ity ny zava-dehibe dia ny famahana sy ny fiandrasana ny tsy fahombiazana mety ho fanampin'ny fanitsiana ireo olana hita ka ny antontan-taratasy sy tenimiafintsika voatahiry rehetra dia azo antoka ao anaty fampiharana. Olana iray hafa miorina amin'ity kinova ity ny iray izay nahatonga ny famandrihana ny mpampiasa sasany tsy ampiharina amin'ny kinova teo aloha.
Ireo mpampiasa Mac no tena mandoa vola indrindra amin'ity rindranasa ity raha ampitahaina amin'ny mpampiasa iOS (10,99 euro) fa tena afaka milaza isika fa mendrika ny euro rehetra vidiny raha raisinay ny fiarovana natolotry ny fampiharana.
Mazava ho azy fa tsy ny rehetra no vonona hanao izany hevero ny vidin'ny 70 euro izay andaniana lisansa tsirairay, saingy tena lafo tokoa ireo rindranasa ary amin'izao fotoana izao dia tsy iray amin'ireo mampiakatra ny vidiny indrindra ny AgileBits. 1Password dia manana kinova fitsapana ho an'izay rehetra maniry ary azonao sintonina izany avy amin'ity rohy ity ihany ary avy eo manapa-kevitra ianao raha mendrika izany ny mividy azy na tsia.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Mac App Store » 1Password dia havaozina amin'ny kinova 6.8.5 ho an'ny Mac
Apple dia mandefa doka vaovao hanentanana ny famandrihana Apple Music
Cupertino dia mandefa beta 2 an'ny watchOS 4.2.2 ary tvOS 11.2.5 ho an'ny mpamorona